နောက်ထပ်ဖာဂူဆန်ပေါ်ထွန်းလာဦးမယ်ထင်နေကြတာလား၊ အိပ်ရာထကြတော့လို့ ယူနိုက်တက်ကို ကာရေဂါအပြတ်ပြော | Duwun
ယူနိုက်တက်ရဲ့နည်းပြခန့်အပ်ရေး ဆောင်ရွက်ပုံတွေကို ကာရေဂါက ဝေဖန်လာတာပါ။
ဘောလုံးဝေဖန်သုံးသပ်ရေးသမားတစ်ယောက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လီဗာပူးဂန္တဝင်နောက်ခံလူဟောင်း ကာရေဂါက ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ နည်းပြကောင်းအများအပြားကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ဖာဂူဆန် နောက်တစ်ယောက်ထပ်ရဦးမယ်လို့ စိတ်ကူးယဥ်နေတဲ့အကြောင်း ဝေဖန်ပြောကြားလာပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၃) မှာ ဖာဂူဆန် အနားယူသွားပြီးနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက်က ဗန်ဟားလ်၊ မော်ရင်ဟိုတို့လို ကမ္ဘာကျော်နည်းပြတွေကို ခန့်အပ်ခဲ့ပေမယ့် အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ဘဲ အခုနောက်ဆုံးခန့်အပ်ထားတဲ့ အသင်းဂန္တဝင်ကစားသမားဟောင်း ဆိုးလ်ရှားကိုလည်း ရာထူးက ထုတ်ပယ်ခဲ့ရပါပြီ။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကာရေဂါက အခုလိုပဲ ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့တာပါ။ ကာရေဂါက “စပါးကို ကျနော်ချီးကျူးပါတယ်။ သူတို့က ကွန်တီကို အချိန်စောပြီး ကြိုးစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စပါးဥက္ကဌ လီဗိုင်းက ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပေမယ့် သေချာတွက်ဆပြီး လှုပ်ရှားသွားခဲ့တာပါ။ အခုလို အချိန်မျိုးမှာ ယူနိုက်တက်နဲ့အပြိုင် ကွန်တီကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ဘယ်သူသိနိုင်ပါ့မလဲ”
“တချို့ကတော့ ကွန်တီကို ယူနိုက်တက်အတွက် မသင့်တော်ဘူးပြောကြပါတယ်။ (ဂယ်ရီနဗီးလ်ကို ရည်ရွယ်သည်) ဒါဆို ယူနိုက်တက်က ဘာလိုချင်နေတာလဲ? နောက်ထပ် ဖာဂူဆန်တစ်ယောက်ပေါ်လာပြီး (၂၅) နှစ်ကြာ အသင်းကို ကိုင်တွယ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရအောင် သူတို့ နုံအနေကြတာလား? အိပ်မက်မက်နေရင်လည်း ထကြတော့၊ ဘောလုံးလောကကြီးက အများကြီး ပြောင်းလဲသွားပြီ။ ဒီလိုနည်းပြမျိုး ထပ်မရှိတော့ပါဘူး”
“ကွန်တီ၊ ပိုချက်တီနို၊ သောမတ်စ်တူချယ်လ်တို့လို အရည်အချင်းရှိတဲ့ နည်းပြတွေနဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ လွဲချော်ခဲ့ရပါပြီ။ သူတို့က လုံလောက်တဲ့ငွေကြေးပမာဏသုံးပြီး အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုတွေ၊ ချန်ပီယံလိဂ်အောင်မြင်မှုတွေရနေပါပြီ။ ယူနိုက်တက်ကတော့ ဆိုးလ်ရှားလက်အောက်မှာ ကစားသမားသစ်ခေါ်ဖို့ ပေါင် (၃၁၂) သန်း သုံးခဲ့ပြီးသားပါ”
“လစာတွေလည်းအများကြီးပေးရင်းနဲ့ပေါ့။ မန်စီးတီးနဲ့ချဲလ်ဆီးတို့က ဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတွက် လုံလောက်တဲ့ အောင်မြင်မှု ချက်ချင်းပြန်ရအောင်လုပ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ရဲ့ လက်ရှိလူစာရင်းနဲ့ အခုထက် အများကြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတာပေါ့။ ဒီတစ်နှစ်တည်းအတွက် မဟုတ်ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်တွေအတွက်ပါ ပြောတာပါ” လို့ ဝေဖန်ပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။